Two Days tour to Petra and Aqaba City starting from Araba Border with overnight Aqaba City back to Araba border
Two Days tour to Petra and Aqaba starts from Aqaba Border with overnight at Aqaba City and back to Aqaba border; this tour starts and ends at Aqaba, arrangements for pick up directly from Aqaba border side after crossing from Eilat side,
Aqaba - Petra tour and overnight at Aqaba City:
And then have free time for photos and explore the site on your own, and then back to the main gate of Petra where you will meet you transport to transfer you to Aqaba to your hotel for overnight.
Next morning, pick up from your hotel at Aqaba and start a full day Aqaba guided city tour, visit Shareif Hussein House, Aqaba Crusader - Mamlok fortress, Aqaba Museum, the Great Arab Revolt Plaza, the Oldest Church in the Middle East, Ayla ruins.
Have a short break with some fresh juice, next will have a walk in the local souq, have an Arabic Mazza and Lunch. Next, will be a visit to the south beach and the Saudi border, and finally have free time for shopping and then too transfer you to Aqaba border and cross back to Eilat.
One night at WAqaba City at standard rooms with Bed and Breakfast.
- One night Accommodation at Aqaba, (Bed and Breakfast)